Banyere Anyị - Yiwu EXJIA Mgbasa IHE CO., LTD.
Flex Pụrụ Iche
Ntekwasa Flex Banner
Otu Way Vision
Printable Photo Akwụkwọ
Pritnable p Akwụkwọ
Self nrapado Vinyl
Ft Graphics Film
Akwụkwọ na akwa
Yiwu Exjia Advertising Ihe Co., Ltd. emi odude ke Yiwu obodo, anyị na-pụrụ iche na mgbasa ozi na ihe maka ihe karịrị 18 afọ. Ọtụtụ containers e exported karịrị 42 mba, mụ na iwu siri ike àgwà akara dabeere na 24 awa 'QC, anyị ngwaahịa gụnyere: laminated Flex ọkọlọtọ, ntekwasa Flex banner (gụnyere frontlit, backlit, abụọ na agba na blockout maka otu akụkụ e biri ebi), na-ekpo ọkụ laminated na ntekwasa blockout maka abụọ e biri ebi. Hot laminated ịkwanyere tarpaulin, ntekwasa ịkwanyere tarpaulin, ntekwasa ntupu. Printable ịkwanyere film, otu ụzọ ọhụụ, onwe nyagide vinyl, agba vinyl, owu kwaaji. Reflective ihe onwunwe, ịkwanyere ụdị osisi, p akwụkwọ, Pita ihe, foto ihe, jụụ lamination film, na-ekpo ọkụ sublimation akwụkwọ, akwụkwọ ahụaja na na.
anyị pụrụ iche na mmepụta na nkà na ụzụ nke ọrụ a afọ 18, na anyị bụ ndị ọkachamara na mba ụlọ ọrụ ụkpụrụ na ngwaahịa na ụkpụrụ.
anyị nwere ihe karịrị 16 afọ nke ire ahụmahụ, anyị nwere ike na-enye ndị ahịa na kacha mma ọrụ.
anyị nwere awa 24 nke QC nke ọ bụla na-apụta nke arọ, n'ogologo, obosara, n'elu, bipụtara mmetụta, mbukota, labeelu.
anyị nwere 6 tent nke ntekwasa na laminated na kalenda igwe, anyị nwere ike inye ngwa ngwa nnyefe oge.
anyị exported 42 mba. (ịghọta ahịa ina nke mba dị iche iche n'ụzọ zuru ezu), anyị maara mkpa nke ọtụtụ ná mba banyere ibu na àgwà.
EXJIA na-ege ntị na nkwado nke teknụzụ na products.There ise Ikike nchọpụta Kemịkalụ, nke na-agụnye anọ anya patent, ihe mepụtara patent na EXJIA.
anyị niile na-eme ihe kasị mma anyị na-enye ihe kasị mma ọrụ n'ihi na anyị na ndị ahịa: elu àgwà ngwaahịa na ala price, kacha mma ọrụ ngwa ngwa nnyefe oge.
Printing ihe: ọhụrụ agba, ngwa ngwa-ihicha ọsọ nke ink. uwe 2 ma ọ bụ 3 ngafe-ebi akwụkwọ, ezigbo elu, uwe mmiri ink, eco-mgbaze ink, mgbaze ink, mgbochi fr, mgbochi UV, ọ pụrụ iru EU ọkọlọtọ. Max obosara ruo 5,10 m.
ịkwanyere tarpaulin: ịkwanyere tarpaulin na ike ntupu n'ime, magburu onwe tensile, wepụsịa na adhesion ike, mgbochi fr, mgbochi UV. mgbochi-ero, mgbochi oriọna, elu elu e lacquered na acrylic na pvdf, o nwere ike a na onwe-ọcha.
Max enweghị nkebi obosara ruo 5,10 m (201 '')
Anyị ozi bụ iji napụta elu uru ahịa anyị na ndị ahịa ha anọgide.
Inye ndị kasị mma na ngwaahịa, ndị kasị zuru okè ọrụ na ezi uche kasị price bụ anyị edumbet.
Anyị na-esi ọnwụ na management echiche nke "Quality bụ mbụ, Technology bụ ndabere".
Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị na ngwaahịa, i nwere ike na-edo gị zụọ ọmụma online, na anyị ga-kpọtụrụ gị ozugbo, anyị na-ukwuu ji ezi obi na-emekọ ihe ọnụ na-ịchọrọ ihe niile dị gị n'akụkụ na-niile nke ọma.
Global Flex Banner Market 2025 Ịrịba ...
IHE DPES Guangzhou Debanye GOSI 2019
DPES Debanye Expo CHINA 2019
Solar Light reflective Sheeting, Vinyl Na Nyefee Film , Wholesale Frontlit Banner Material, Pvc Vinyl, One-Way Vision Vinyl Film , Quality Flex Banner,